iCloud iskama dhexmarin doono Safari tabs-ka Mac-kayga | Waxaan ka socdaa mac
In kastoo qaar badan oo ka mid ah iswaafajinta iCloud Waa wax labaad, kuwa naga mid ah ee haysta aalado dhowr ah oo Apple ah in daruurta iCloud si fiican u shaqeyso ay tahay baahi sii kordheysa taasna waa, tusaale ahaan kiiskeyga, waxaan si aan kala sooc lahayn u isticmaalaa iPad-kayga, iPhone-ka iyo Mac-da sidaa darteed waxaan u baahanahay isbedelada I ku samee mid ka mid ah aaladahaas si aad isla markaaba uga dhex muuqato aaladaha kale.
Mid ka mid ah waxyaabaha aan u baahanahay in la iswaafajiyo marwalba waa tabsyada aan ku abuuro labada qalab. Iyada oo aad horeyba u ogtahay, in muddo ah tabsyadaas ayaa la iswaafajiyay midba midka kale iyada oo loo marayo dariiqa iCloud. Si kastaba ha noqotee, waxaa jira waqtiyo markii iswaafajintu istaagto waana inaad ku qasabtaa dib-u-hawlgelinta.
Maskaxda ku hay in haddii aad aragto in tabsyada 'Safari' ee labada Mac iyo IOS labaduba aysan si fiican u wada shaqeyneynin, waxay noqon kartaa calaamad muujineysa inaad ku qasbeyso dib-u-habeynta xogta Safari. Si taas loo sameeyo waa inaad ku maamushaa guddiga iCloud ee Rabitaanka Nidaamka> iCloud> Safari.
Daaqadda iCloud waxaad awoodi doontaa inaad ku aragto dhammaan waxyaabaha nidaamka ee u dhigma daruuraha. Waxaa ka mid ah sheyga Safari ee ay tahay in lagu xusho buluug. Inuu nidaamku sameeyo dib-u-habeynta xogta Safari ee leh iCloud Waa inaad doorataa sheyga, ku sug dhowr daqiiqadood iyadoo la bakhtiiyey oo aad markale doorato.
Waqtigaas waxaad arki doontaa sida loo yaqaan 'Safari tabs' ee labadaba Mac iyo Safari ee iOs ay u cusbooneysiin doonaan isla markaana u muujinayaan isla macluumaadka labada barnaamij.
Wadada buuxda ee maqaalka: Waxaan ka socdaa mac » Mac OS X » macOS Sierra » iCloud ma hagaagsan doonaa Safari tabs on my Mac
Spotify wuxuu ka baxsanayaa Apple Music wuxuuna gaaraa 50 milyan oo isticmaale